GOOL INDHO DARAAN DAR AH: Daawo Goolka uu Ibrahimovic ku gaaray 500 – Gool FM
GOOL INDHO DARAAN DAR AH: Daawo Goolka uu Ibrahimovic ku gaaray 500
Byare September 16, 2018
(America) 16 Sab 2018. Zlatan Ibrahimović ayaa dhaliyey goolkiisii 500-aad ee xirfaddiisa ciyaareed, waxaana uu Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kula biiray xiddigaha ugu goolasha badan.
Ibra ayaa dhaliyay gool caaqibo leh kulan kooxdiisa LA Galaxy ay guul darro 5-3 kala kulantay Toronto FC.
Joog dheeraha reer Sweden oo haatan dhaliyey goolkiisii 500-aad ayaa ka mid noqday kaliya saddex ciyaaryahan oo haatan ciyaaraha ku jira kuwaasoo dalkooda iyo kooxaha ay u soo ciyaareen u dhaliyey 500 oo gool iyo in ka badan, labada ciyaaryahan oo kalena waa Cristiano Ronaldo oo wadar ahaan dhaliyey 658 gool iyo Lionel Messi oo dhaliyey 621 gool.
Ibra ayaa 62 gool u dhaliyay xulkiisa Sweden halka Kooxihii uu u soo ciyaaray uu sidan goolasha ugu kala dhaliyay.
Malmö (18 gool), Ajax (48), Juventus (26), Inter Milan (66), Barcelona (22), AC Milan (56), PSG (156), Man Utd (29) halka kooxda uu haatan ka tirsan yahay ee LA Galaxy uu u dhaliyey goolkiisii 17-aad.
DAAWO goolka indho daraan darka ah uu Ibra ku gaaray 500:
Barcelona oo war wanaasan heleysa kahor kulnkeeda soo aadan
Shaxda rasmiga ah ee Juventus vs Sassuolo (Ronaldo oo raadinaya goolkiisii ugu horeeyay ee Serie A)